अचम्मका मेयर साहेब; जसले सिकाउछन बालबालिकालाई कराँते !::सुनौलो न्यूज
अचम्मका मेयर साहेब; जसले सिकाउछन बालबालिकालाई कराँते !
प्रायः व्यस्त रहनुपर्ने नगरपालिकाका मेयरले बालबालिकालाई कराते सिकाउँछन् भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर भेरी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले सदरमुकाम खलंगाका बालबालिकालाई कराते सिकाउन थालेका छन् । मेयरसँग कराते सिक्न पाउँदा खेलाडी पनि दंग छन् । उनलाई कामको भ्याइनभ्याइ छ । कार्यकर्ता र नगरको कामले उनी निकै व्यस्त हुन्छन् । तर, व्यस्तताकाबीच पनि उनले समय निकालेर बालबालिकालाई कराते सिकाउने गरेका छन् ।
मेयर घर्तीले बिहानबेलुका समय निकालेर कराते सिकाउँदै आएका छन् । ‘नगर प्रमुखसँग कराते सिक्न पाउँदा गर्व लागेको छ’, खेलाडी विशाल विकले भने । सदरमुकामभित्रका २० जना बालबालिका नगरप्रमुखसँग कराते सिकिरहेका छन् । मेयरले सिकाउन थालेपछि खेलाडी संख्या पनि बढेको छ । बालबालिकालाई स्वस्थ र अनुशासित बनाउन खेलकुद जरुरी रहेकाले आफूले खेल सिकाउने गरेको नगरप्रमुख घर्तीको भनाइ छ ।
धेरै समय जनताको काममा व्यस्त हुनु परे पनि केही समय निकालेर साना भाइबहिनीलाई खेल सिकाउन पाउँदा आनन्द लाग्ने गरेको उनले बताए । ‘म पनि खेलाडी भएकाले खेलकुदमा फर्कंदा र आफूले सिकेको सिकाउन पाउँदा तनाव कम हुनुका साथै आनन्द पनि आउँछ’, नगर प्रमुख घर्तीले भने । घर्ती करातेका पूर्वराष्ट्रिय खेलाडी हुन् । हाल गोजुरियो कराते दो संघका केन्द्रीय अध्यक्ष रहेका घर्ती एसियन कराते महासंघका रेफ्री पनि हुन् ।
मेयर काम विशेषले सदरमुकामबाहिर जानुपरे अर्का प्रशिक्षक अमृत मल्लले ती बालबालिकालाई सिकाउने गरेका छन् । मेयर घर्तीले खेलाडीको हौसला तथा खेलकुद विकास गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएका छन् । सदरमुकाममा खेलकुदको पूर्वाधार विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गर्ने उनको योजना छ । अन्नपुर्णपोस्ट बाट